कोरोना महामारीमा जन्मिएको स्थानीय उद्यम - Netizen Nepal
कोरोना महामारीमा जन्मिएको स्थानीय उद्यम
in आर्थिक, उद्योग / व्यवसाय, नेटिजन विशेष, मुख्य समचार
काठमाडौँ, २९ चैत । कोभिड महामारीले नेपालका हरेक क्षेत्रमा केहि न केहि रुपमा असर पुर्याएको छ । २०७६ चैतदेखि लागु गरिएको बन्दाबन्दीको प्रभावले उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी तथा अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अवस्थामा पुग्यो । व्यवसाय बचाउनुभन्दा पनि महामारीबाट आफ्नो ज्यान बचाउनु महत्वपूर्ण हुने हेतुले अधिकांश शहर छाडेर गाउँ पसे । अझ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुसमेत धमाधम स्वदेश फर्किए ।
स्वदेश फर्कंदा कतिपयको आर्थिक उपार्जनको स्रोत गुम्यो । तर कतिपयले भने यहि संकटको समयलाई अवसरको रुपमा परिणत गरिदिए । कोरोना महामारीले युवाहरुलाई गाउँ फर्काउने र गाउँघरमा सम्भावनाको खोजि गर्न समेत अवसर दियो । सैलुङ्ग गाउँपालिकामा कोरोना महामारीका समयमा केहि स्थानिय स्वरोजगार र उद्यमशिलताका प्रयास भएका छन् । गाउँमै झोल साबुन उत्पादन गरेर सक्षम हुनुभएकी पशुपति बस्नेत र मास्कको उत्पादन र बिक्रिवितरण गर्दै जिविका चलाइरहनुभएकी कृष्णमायाँ थापा यसका उदाहरण हुनुहुन्छ ।
रोजगारीका सिलसिलामा भारतको गोवामा बस्दै आउनुभएकी पशुपति बस्नेत एक हप्तापछि लकडाउन खुल्ने आशमा हुनुहुन्थ्यो। लकडाउन एक हप्ता दुई हप्ता हुँदै चार महिनासम्म लम्बियो । भारतमा रोजगारी गर्दै जिविका धान्नुभएकी उहाँलाई महामारीबाट सजिलै छुटकारा पाइदैन भन्ने लाग्न थाल्यो । त्यसैले उहाँले गाउँ फर्कने निधो गर्नुभयो । बोर्डरसम्म आउँ उहाँलाई काम गरेको कम्पनीले सहयोग गर्यो। त्यसपछि स्थानिय सरकारको सहयोगमा आफ्नै गाउँ फर्कनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘फर्कने क्रममा सास्ती त निकै नै व्यहोर्नुपर्यो । तर मेरो उद्देश्य मर्नै परे पनि आफ्नै ठाउँमा आइपुग्नु थियो ।’
गाउँ आएपछि पनि काम केहि थिएँ । उहाँको दिनचर्या बस्ने खाने काममै बित्न थाल्यो। गाउँमै केहि गर्नुपर्छ भन्ने सोच त नभएको होइन तर के गर्ने भन्ने कुरामा उहाँ दुविधामा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि, उहाँले वाटरएड नेपाल र स्थानीय गैरसरकारी संस्था सिडीएफको सहयोगमा झोल साबुन बनाउने तालिम लिनुभयो । तालिम लिएको केहि दिन पछिबाट साबुन उत्पादन समेत गर्न थाल्नुभयो । गाउँका मानिसहरुमा हात धुने बानीको विकास भएकाले उहाँले गाउँमै बजारको सम्भावना देख्नु भयो । साबुनको खपत पनि हुन थाल्यो । उहाँलाई लकडाउनले उद्यमी बन्ने अवसर दियो । थापा अहिले पनि साबून उत्पादन गर्नुहुन्छ, तर बजारको राम्रो व्यवस्था नहुँदा अलि समस्या भोग्नुपरेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, कोरोना महामारीको त्रास अलि साम्य हुँदै गएपछि साबुन बिक्रि पनि कम भएको छ । स्थानिय सरकारले बजार व्यवस्थापन राम्रोसंग गरिदिए नेपालमै आयआर्जन गर्न सकिन्थ्यो ।
उहाँसंग यहि व्यवसाय गरेर नेपालमै केहि गर्न सकिन्छ भन्ने आत्म विश्वास पनि छ । स्थानीय सरकारले बजारको लागि सहयोग गरेमा विदेश नजाने बरु आफ्नै गाउँमा उद्यमी बनेर बस्ने उहाँको चाहना छ ।
बारम्बार हात धुने व्यवहार स्वास्थ जीवनको प्रभावकारी व्यवहार हो । त्यसैले हात धुने व्यवहार कोरोना महामारीका बेला मात्र नभई सधैंभरि पालना गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानिय सरकारले कडाइका साथ हात धुने व्यवहारको पालना गर्न लागाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ, शैलुंग गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारत दुलाल । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानिय उत्पादन स्थानियस्तरमै प्रयोग गर्नका लागि हामीले कामहरु गरिरहेका छौं । बजारी सामाग्री प्रयोग गर्नुभन्दा स्थानिय साबूनको प्रयोग गर्नका लागि स्थानियलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका छौं ।’
वडा नं ३ का अध्यक्ष ध्रुब श्रेष्ठ यसमा सहमति जनाउंदै थप्नुहुन्छ, ‘ठाउँ ठाउँमा राखिएका सार्वजनिक धाराहरुमा स्थानिय साबुनको उपलब्धता र मास्कको प्रयोगमा पनि कडाइ गर्न सकियो भने पनि स्थानिय उत्पादनको प्रयोगमा मानिसलाई बानि पर्न थाल्छ । स्थानीय सरकारले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका स्थानमा स्थानीय झोल साबुनको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेर युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र त्यसको लागि आवश्यक तयारी भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुलाल बताउनुहुन्छ ।
गाउँमै सिलाइकटाइ व्यवसाय गरेकी कृष्णमायाँ थापाले पनि लकडाउनपछि स्थानियलाई आवश्यक पर्ने मास्क गाउँमै उत्पादन गर्न थाल्नुभयो । अहिले उहाँले उत्पादन गरेको मास्क गाउँमा मात्र नभई काठमाडौँसम्म बिक्रि हुन्छ । थापाको पनि समस्या बजारकै छ । उहाँ आफ्नो शिप र उत्पादनले राम्रोसंग बजार नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मास्क त जति पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर बजारमा सोचेजस्तो माग छैन ।’
गाउँपालिकाले उद्यमशिलातालाई निरन्तरता दिनका लागि मास्क, स्यानीटाईजर उत्पादन संगसंगै सीलाई बुनाइ, मोबाइल मर्मत, कम्प्युटर, ब्युटीपार्लरसम्बन्धि तालिम तथा कृषिका क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । स्थानिय स्तरमा उद्यमको व्यवस्था र व्यवस्थापनका लागि स्थानिय सरकार प्रतिवद्द रहेको समेत गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
स्वच्छता व्यवहार परिवर्तनलाई उद्यमसंग जोड्ने गाउँपालिकाको प्रायसका साझेदार हुन् वाटरएड नेपाल लगायतका संस्थाहरु । वाटरएड नेपालको सहयोगमा गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरुमा हात धुने स्टेसनहरु राखिएको छ । यसले गर्दा मानिसहरुलाई हात धुनु पर्छ भन्ने चेतना विकाससंगै हात धुने सुविधा पनि प्राप्त भएको छ । वाटरएड नेपालकै सहयोगमा मास्क तथा झोल साबुन उत्पादनको तालिम दिइएको थियो । यी कार्यहरु संकट र महामारीमा पनि अवसरको खोजी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण भएको र यी शुरुवातहरुलाई स्थानीय सरकारले थप मजबुत बनाउँदै जाने अध्यक्ष दुलाल बताउनुहुन्छ ।
Tags: उद्यमकोरोनापार्वती अधिकारीशैलुङ
अस्पतालमा शय्या चाहिए यी नम्बरमा फोन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
छाडा शब्द बोल्दा किन मन हलुङ्गो हुन्छ?
प्रि मनसुन थप सक्रिय, आज र भोलि देशभर पानी पर्ने सम्भावना
अन्न नखानुहोस्, चार दिनमा कोरोना चट् : भारतीय डाक्टर ज्योत्सना
सल्लाहकारः डा. पियुष मिश्रा
संञ्चालक/सम्पादकः ओम प्रकाश घिमिरे
संवाददाताः पार्बती अधिकारी, गीता अधिकारी
मल्टीमीडीयाः सुदीप सुनुवार